ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးကဒ္ – MATE
ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးကဒ္ September 9, 2018 သန္ဓေတားဆေးကတ်နှင့် သွေးခဲခြင်းပြဿနာ
“သန္ဓေတားဆေးကတ်နှင့် သွေးခဲခြင်းပြဿနာ” သန္ဓေတားဆေးကတ်သောက်ချင်လို့ ဆရာဝန်နဲ့သွားဆွေးနွေးတဲ့ အမျိုးသမီးတွေ သိပါလိမ့်မယ်။ ဆရာဝန်က မိမိရဲ့ ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ ရာဇဝင်ကိုမေးရင် နှလုံးရောဂါ၊ လေဖြတ်တာနဲ့ ခြေထောက်မှာ သွေးကြောထုံးတာ သွေးခဲတာ ဖြစ်ဖူးလားဆိုတဲ့မေးခွန်း မေးတတ်ပါတယ်။ ဒီမေးခွန်းက အရေးကြီးလား။ ဒါတွေရှိနေရင် သန္ဓေတားဆေးကတ်ကို သောက်လို့ရနိုင်သလားဆိုတာ ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်။ သွေးခဲဖြစ်ပေါ်ခြင်း (သို့) သွေးကြောထုံးခြင်း?ခြေထောက်မှာ ဖြစ်တဲ့သွေးခဲဆိုတာ ခြေထောက်ထဲမှာသွေးလှည့်ပတ်ပို့ဆောင်နေတဲ့ သွေးပြန်ကြောထဲမှာ ဖြစ်တာပါ။ ခြေထောက်သွေးပြန်ကြောတွေမှာ ၂ မျိုးရှိပါတယ်။ အပေါ်ယံသွေးပြန်ကြောနဲ့ ပိုနက်တဲ့ ခြေထောက်အတွင်းပိုင်း ကြွက်သားတွေကြားထဲမှာရှိတဲ့ သွေးပြန်ကြောတွေပါ။ ဒီခြေထောက်သွေးခဲတွေက ကြွက်သားတွေကြားထဲက အောက်ဘက်သွေးပြန်ကြောတွေထဲမှာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးခဲဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ? သွေးစီးတာ နှေးကွေးပြီး သွေးခဲလွယ်တဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်တဲ့ အသက်ကြီးခြင်း၊ ခွဲစိတ်မှုကြီးကြီးမားမား လုပ်ထားခြင်း (ဝမ်းဗိုက်ခွဲစိတ်မှု၊ ပေါင်ရိုးခွဲစိတ်မှု)၊ အချိန်ကြာ မလှုပ်မရှားနေရခြင်း …
ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးကဒ္ August 16, 2018 တားဆေးကို ဘယ်နေ့စသောက်ရမလဲ
“တားဆေးကို ဘယနြေ့စသောကရြမလဲ” အဆငပြှတေဲ့နေ့ စသောကလြို့ရပါတယြ။ ဟောမြုနြးပါတဲ့ တားဆေးဖှဈလို့ ဟောမြုနြးရဲ့ အာနိသငရြဖို့ စောငြ့ရတဲ့ အတှကြ ရာသီစကဝြနြးရဲ့ ဘယနြေ့မှာ ဆေးစသောကလြဲပေါြ မူတညပြှီး ကိုယဝြနတြားနိုငတြဲ့ အာနိသငြ ဘယနြေ့မှာစရမလဲ ကှာပါတယြ။ တခွို့ ဟောမြုနြး မပါတဲ့ နညြးတှလေို အခုသုံးအခုသနျဓတေားလို့မရပါဘူး။ ရာသီပေါတြဲ့နေ့ ရာသီပေါတြဲ့နေ့မှာ စသောကရြငြ ကိုယဝြနမြရအောငြ တနြးပှီး ကာကှယပြေးနိုငပြါတယြ။ တခှားကိုယဝြနတြားနညြးတှေ တှဲသုံးစရာမလိုပါဘူး။ ရာသီစလာတဲ့နေ့ကနေ ငါးရကအြတှငြး ရာသီပါတြဲ့နေ့ကနေ ငါးရကအြတှငြး စသောကရြငြ ကိုယဝြနမြရအောငြ တနြးပှီး ကာကှယပြေးနိုငပြါတယြ။ တခှားကိုယဝြနတြားနညြးတှေ တှဲသုံးစရာမလိုပါဘူး။ အကယြ၍ ရာသီလာတာ အရမြးစိပတြယဆြိုရငြ (ရာသီတခုနဲ့တခုကှား ၂၃ရကထြကြ နညျးရငြ) ဒါမှမဟုတြ ရာသီလာတာမမှနရြငြ တော့ ဆေးစသောကတြဲ့ နေ့ကနေ (၇)ရကအြတှငြး …
ေန႔စဥ္ေသာက္ေဆးကဒ္ August 16, 2018 တားဆေးကိုဘယ်ကနေစသောက်ရမလဲ
“တားဆေးကိုဘယကြနစသေောကရြမလဲ” ဆေးကဒမြှာပါတဲ့ မ ွှား အရောငမြတူတဲ့ ဆေးလုံးတှကေ ဘာအဓိပျဗာယလြဲ? ဘယကြနစသေောကရြမှာလဲ? မှနမြာပှညဈြေးကှကမြှာ အမွားအားဖှငြ့ရှိတဲ့ တနေ့တလုံးသောကတြားဆေးတှကေ ၂၈ လုံး၊ ဆေး ၄ တနြးပါတဲ့ဆေးကဒတြှပေါ။ မ ွှားလေးစပှထားတဲ့ အဖှူရောငဆြေးလုံးလေးနရောကနေ အစဉလြိုကသြောကသြှားပါ။ အဖှူရောငအြပေါသြုံးတနြးက ဟောမြုနြးပါပါတယြ။ အောကဆြုံးတတနြးက ဟောမြုနြးမပါတဲ့ သံဓါတပြါတဲ့ အားဆေးလုံးလေးတှေ (ဒါမှမဟုတြ) ဘာအာနိသငမြှမရှိတဲ့ဆေးလုံးလေးတှပေါ။ အောကဆြုံးတနြးကို သောကတြဲ့ အခွိနမြှာ ရာသီလာပါလိမြ့မယြ။ ဆေးကဒထြဲမှာပါတဲ့ ဆေးအားလုံးကုနသြှားရငြ (ရာသီလာနတေုနြးဖှဈစေ၊ ပှီးသှားပှီဖှဈစေ) ဆေးကဒြ အသဈကို နောကတြရကမြှာ ရကမြခှားပဲ စသောကပြါ။ ကိုယဝြနဆြောငြ နဲ့ မွိုးဆကပြှားကနွြးမာရေး ဗဟုသုတတှေ အမှဲဖတရြှုနိုငအြောငြ MATE – မိတြ မွိုးဆကပြှားကနွြးမာရေး page …